Dhalinyarada reer Sanaag ee ku dhaqan Hargeysa oo Casuumay Masuuliyiinta Urur-siyaasadeedka Wadani, muujiyey-na taageerada ay u hayaan | Berberanews.com
Home WARARKA Dhalinyarada reer Sanaag ee ku dhaqan Hargeysa oo Casuumay Masuuliyiinta Urur-siyaasadeedka Wadani,...
Dhalinyarada reer Sanaag ee ku dhaqan Hargeysa oo Casuumay Masuuliyiinta Urur-siyaasadeedka Wadani, muujiyey-na taageerada ay u hayaan
Hargeysa-(Berberanews)- Guddoomiyaha Ku-meel-gaadhka ah ee Urur-siyaasadeedka WADANI iyo masuuliyiinta kale ee Ururkaas, ayaa ka qaybgalay kulan ay soo qaban-qaabiyeen Dhalinyarada iyo Aqoonyahanka gobolka sagaan ee ku sugan Caasimadda Hargeysa, kaasoo ay taageero buuxda ugu muujiyeen WADANI.
Kulankaas oo ahaa mid si fiican loo soo agaasimay oo caawa lagu qabtay Hudheelka Hadhwanaag ee Magalada Hargeysa, ayaa waxa ka qayb galay Guddoomiyaha Urur-siyaasadeedka WADANI ahna Guddoomiyaha Golaha Wakiilladda Somaliland Md. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi (Cirro), Masuuliyiinka kale oo ka tirsan Ururka WADANI, Aqoonyahan iyo Ardayda Jaamacadaha ka dhigta Hargeysa ee Gobolka Sanaag iyo marti-sharaf kale oo tira badan.
Maxamed Cabdiraxmaan Kaar oo ka mid ahaa dhalinyarada xafladda soo qaban-qaabiyey ee reer Sanaag ee ku dhaqan magaalada Hargeysa oo ugu horreyn kulankaa ka hadlay, ayaa faahfaahin ka bixiyey ujeeddada ay u qabteen munaasibaddaas. “Caawa waxaannu kulankan Xafladda ah u qabannay inaannu ku muujinno taageerada aanu u hayno Urur-siyaasadeedka WADANI iyo Guddoomiye Cabdiramaan. Annagu haddaannu nahay reer Sanaag gaar ahaan dhalinyarada ku dhaqan Caasimadda Hargeysa, waxaannu caawa halkan ku soo bandhigaynaa sida qiimaha leh ee aanu u taageersan-nahay Ururka WADANI, waayo? Annagu ka reer Sanaag ahaan waxa tuseele noo noqotay sida uu ururka WADANI u danaynayo hurumarinta Somaliland, waxaan si gaara u sheegayaa ka qayb qaadashada Waddada magaalada Ceertigaabo.” Sidaa ayuu Maxamed Cabdiraxmaan Kaar.
Waxa kale oo iyaduna halkaasi ka hadashay Intisaar Jamac Cabdi, ayaa dadweynaha reer Sanaag ugu baaqday inay taageero buuxda oo aanay u kala hadhin u muujiyaan Urur-siyaasadeedka WADANI, waxaanay tidhi; “Anigu waxaan ka imid Gobolka Sanaag gaar ahaan Caasimaddiisii Ceerigaabo, waxaanan idiin sheegaya in Gobolkaas uu ururka WAWDANI ka hirgalay, WADANIGA Ceerigaabo waa mid is gaadhsiisan. Waxa kale oo xusid mudan in guud ahaan Gobolka Sanaag meel walba uu gaadhay warka WADANI. Waxaan soo jeedinayaa inay xooggeenna oo midaysan aynu ku taageerno ururkani si aynu u gaadhno himilada aynu hiigsanayno.”
Cabdillaahi Saciid Dheere oo ka mid ah aas-aasayaasha Urur-siyaasadeedka WADANI, ayaa sheegay in Ururku weli ku jiro is abaabulka hirgelinta Xafiisyadiisa gobollada iyo degmooyinka dalka. “Maaddaama oo uu aas-aaska Ururku immika bilow yahay wali maannu gaadhin in aanu siyaasad u dejino, laakiin waxaannu ku jirnaa is abaabulkii Xafiisyo furidda, taageero-raadintii, iyo sidii loo noqon lahaa Xisbi Qaran, waxaannu idinka doonaynaa inaad ka mid noqotaan taageerayaasha WADANI, Indhidhiinna ayaa idiin macallin ah, sidaa aad immikaba u doorateen WADANI ayaanan idinku hambalyeynaynaa. Ururka WADANI waa mid qaan-gadh ah oo ka furan guud ahaan Gobollada iyo degmooyinka Somaliland, iyo waddanka dibeddiisa-ba.” Ayuu yidhi Cabdillaahi Saciid-dheere.
Ugu Dambayntii Guddoomiyaha Ku-meel-gaadhka ah ee Urur-siyaasadeedka WADANI ahna Guddoomiyaha Golaha Wakiillada Somaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi (Ciro) oo halkaasi ka hadlay, ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay ka qaybgalka Xafladdan, isla markaana hambalyo u diray dhalinyarta is-abaabushay ee Ururka taageerada u muujiyey. “Waxaan aad ugu mahad-naqayaa dhalinyarada Gobolka Sanaag ee ku dhaqan Caasimadda Hargeysa oo caawa isugu kaayo daray Taageero iyo Casuumad, waxa xusid mudan in aanay labadaasi hore isu raaci jirin, markaa caawa garan maayo si aan u muujiyo mahad-naqa aan idiin hayo. Waxaannu rejeynayaa in aannu ku guulsan doonno in aynu noqonno Xisbi qaran, markaasi ayeynu u soo gudbi doonnaa himilooyinka waaweyn ee aynu doonayno in aynu ku hurumarinno Qaranka Somaliland.” sidaa ayuu ayuu yidhi Cabdiraxmaan-Cirro oo dhoolla-caddaynayey.
Waxaanu Guddoomiye Cabdi-raxmaan-Cirro oo hadalkiisa sii wataa intaa ku daray oo uu yidhi; “Waxa caawa Xildhibaan ka mid ah Mudanayaasha Golaha Wakiillada ee ka tirsan Aasaasayaasha ururka WADANI uu ii sheegay qorshe ay wadaan, kaas oo ay ku taageerayaan horurmarka ay busladu waddo ee xagga waddooyinka ee dalka ka socda, kuwaas oo ay ka mid yihiin jidadka dhismahooda laga wado Ceerigaabo, Boorama, Dawga-Cad, Balli-gubadle iyo kuwo kale, waxaannu sidoo kale taageerayaa dhammaan ciddii ka qayb qaadatay hurumaka kaabayaasha Bulshada.”
Previous articleMediterranean takes record as most deadly stretch of water for refugees and migrants in 2011
Next articleMasuuliyiinta Xisbiyada Mucaaridka ah ee UDUB iyo UCID oo ka hadlay ujeeddada kulan ay la yeesheen Wefti Ingiriiska ka socda